Ka fekerka daynsiga guryaha dadka waa wayn / Minnesota.gov
Feature image for Ka fekerka daynsiga guryaha dadka waa wayn
Waaxda Maraykanka Guriyaynta iyo Horumarinta Magaalada: Beddelka Qiimaha Guriga Daynsiga guryaha ee Waayeelka
Xafiiska Ilaalinta Maaliyada Macmiilka: Considering a Reverse Mortgage?
Xafiiska Ilaalinta Maaliyada Macmiilka: Waydii CFPB
Gudida Ganacsiga federaaliga: Daynsiga Guryaha dadka waa wayns
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Minnesota:Heshiiska Dhabta ah ee Daynsiga Guryaa dadka waa wayn
Gamacsigu waxa uu halkan u joogaa inuu ku caawiyo
La xdhiidh Xarunta Waaxda Ganacsiga Adeegyada Macmiilka ee Minnesota
Greater MN keliya: 800-657-3602
Miya adiga ama qof kale oo aad garanaysaa ka fekera inuu helo daynsiga guryaha?
Daynsiga guryaha dadka waa wayn waxay u noqon karaan ikhtiyaaro xiiso badan oo waayeelka haysta dakhliga xadidan iyo hubaal la’aanta dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, noocyada daynsiga gurigu waa alaabada maaliyada adag taas oo inta badan leh kharash badan iyo haliso u baahan in laga fekero.
Waaxda Ganacsiga Minnesota waxay ku dhiirigelisaa mulkiilayaasha guryaha inay si feejigan dib ugu qiimeeyaan ikhtiyaaradooda oo ay bartaan wax ku saabsan qiimayaasha iyo khataraha ay ku lugleedahay daynsga guryaha dadka wayn ka hor inta aan go’aan la gaadhin.
Fahanka aasaaska daynsiga guryaha dadka waa wayn
Daynsiga guryaha dadka wayn waa nooc gaar ah oo amaah ah oo siisa fursad mulkiilayaasha guryaha 62 sano jir ah ama ka wayn inay amaahdaan qiimaha gurigooda la gu dhisay.
Daynsiga guryaha dadka wayn waxa uu u oggolaadaa mulkiilayaasha helida qiimaha guriga qaab lacag caddaana ah –mid uun lacag mar la wada bixiyo, ama lacag bixin bile ah ama laynka daynka. Waxaa logu yeedhaa loogu yeedhaa daynisga guryaha dadka wayn sababtoo ah waxaad ka heshaa lacag amaahiyaha beddelka halkii uu ka bixin lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, dulsaar ayaa la saaraa lacagta aad hesho, markaas hadhaaga amaahdaada waxay kordhi doontaa muddo ka dib. Sababtoo ah qiimaha dhismahu wa qiimaha gurigaaga oo laga jaray lacagta aad heshay iyo dulsaarka kordhay, waxaad yeelan dontaa qiime dhisme oo ka yar gurigaaga marka hadhaaga amaahda ay korodho.
Daynsiga guryaha dadka wayn, amaahda dib looma bixinayo ilaa amaahdaha u dambeeya, la amaahdaha ama lamaanaha u qalmaa uu dhinto, iibiyo guriga ama u guuro guri. Wakhtigaas, hadhaaga buuxa ee amaahda, waxa uu noqon doona mid la bixinayo ama guriga waxa uu noqon doonaa mid ku guul daraystay bixinta lacagta, taas oo keeni doonta dib ula wareega guriga. Badanka tusaalooyinka, gurigu waa in la iibiyaa si loo bixiyo amaahda.
Daynsiga guryaha dad waa wayn, weli waad yeelan kartaa guri, maaha amaahiyaha. Tan macnaheedu waa waxaad u baahantahay inaad bixiso cashuuraha dhismaha, aad sii wado caymiska khatarta ah oo aad gurigaaga si wanaagsan u samayso. Haddii aad ku fashillanto inaad sidaas samayso, amaahiyahu waxa uu go’aan ku gaadhi karaa in amaahdaadii ay noqotay mid aan lacagta la bixinayn oo hantida la daynsaday lala wareegayo.
Doorashooyinka bixinta lacagta
Su’aalaha la waydiinayo
U qalmida daynisga guryaha dadka waa wayn
Si aad u codsato daynsiga guryaha dadka waa wayn, waa inad noqotaa ugu yaraan 62 sano jir, ku nool guri oo bixiyay badan dhammaan daynsiga guriga.
Badanka daynsiga guryaha dad waa wayn ee maanta waa caymisya Maamulka Guriyanta Federaalka (FHA), sidii qayb ah Barnaamijkeeda Beddelka Qiimaha Guriga Daynsiga guryaha (HECM) . Haddii aad u qalanto, waa inaad marka koowad la kullantaa la taliyaha ay ansixisay Waaxda Guriyaynta iyo Horumarinta Magaalada Maraykanka(the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)) Hoosta sharciga Minnesota, amaahdahu waa inuu siiyaa amaahdaha mustaqbalka ugu yaraan liiska saddexda wakaaladood ee la talinta guraynta ee madaxa banaan. Amaahiyaha sidoo kale waa inuu helaa caddaynta in codadahu dhab ahaan uu helay la talinta.
Marka lala kulmay la taliyaha, ka hadal walaacyadaada oo hubso inaad siiso la taliyahaaga ta saxda ah iyo swirka buuxa ee maaliyadaada. La taliyahu kuma siin karo adiga talada suuragalka ah ee ugu wanaagsan la’aan dhammaan macluumaadka la xidhiidha.
La taliyaha fiican waxa uu hubsan doonaa in aad si buuxda u fahanto daynsiga guryaha dadka waa wayn oo waa uu kaa caawin doonaa adiga inaad go’aanada gaadho.
Fahanka noocyada daynsiga guryaha dadka waa awayn Waxaa jira labba nooc oo daynsiga guryaha dadka waa wayn ah oo laga heli karo Minnesota:
Beddelka Qiimaha Guriga Daynsiga guryaha (HECMs) waa amaahda federaal ahaan la caymiyo oo keliya laga heli karo Maamulka Guriyaynta Federaalka-amaahiyayaasha ay ansaxisay. Amaahda HECM waxaa loo isticmaali karaa ujeedo kasta oo waa doorashada inta badan aadka u caanka ah.
Daynsiga guryaha dadka waa wayn ee ujeedada keliya waa ikhtiyaarka ugu jaban, laakiin waxaa keliya loo isticmaalaa hal ujeedo. Tusaale ahaan, Minnesota waxay bixisaa;Muwaadinka Waayeelka ah Barnaamijka Daahinta Cashuurta Hantida ,taa oo ah amaah dulsaar hoosaysa si loo caawiyo wayeelku inay bixiyaan cashuuraha hantida dhismaha ah.
Fahanka doorashooyinka lacag bixinta daynsiga gurigaaga dadka waa wayn
Waxaa jira saddex doorasho oo ah sida mulkiilaha guriga uu ku heli karo lacagta daynsiga guryaha dadka waa wayn. Xusuuso inaad la hadasho la taliyahaaga guriyaynta ka hor go’aan ka gaadhida nooca daynsiga guryaha iyo sida aad ku heli doonto lacag.
Laynka amaahda waa marka mulkiilaha guriga keliya qaato lacagta markay u baahanyihiin oo keliya waxay bixisaa dulsaarka lacagta ay qaataan. Muddo kadib, lacag badan ayaa u diyaar ahaan doonta mulkiilaha guriga.
Lacag bixinta bilaha ah waa marka mulkiilaha gurigu helo lacag hal mar bishii oo ay ahaan karto fikrad fiican haddii aad caawimo u baahanatahay bixinta karashka lacagta bilaha ah. Laag bixinta bilaha ah waxay ku xidhnaan kartaa laynka doorashada amaahda.
Iktiyaarada kharashka bilaha ah waxay leeyihiin labba qaab:
Erayga—mulkiilaha guriga waxa uu helaa qadar go’an oo lacag caddaana ah wixii muddada gaarka ah
Kiraysiga— mulkiilaha gurigu waxa uu helaa qadar go’an oo lacag caddaana ah ilaa inta ay ku nool yihiin guriga
Lacag bixinta keliga ah waa marka mulkiilahu helo lacag badan oo wada socota, laakiin caadi ahaan ay ka yartahay intii ay ka heli lahaayeen qaababka lacag bixinta kala duwan. Lacag bixinta keliga ahna, mulkiilaha guriga waxa uu urursan doonaa dulsaarka dhammaan lacagta ay helaan, xataa haddii aanay isticmaalin iyadda dhammaan.
Su’aalaha la waydiinayo ka hor, muddada, iyo ka dib Haddii aad ka fekerayso wax ku saabsan daynsiga guryaha dadka waa wayn, kuwa soo socdaa waa qayb su’aalo muhiim ah oo aad waydiin lahayd. Kala hadal qoyskaaga. La kullan la taliyaha la ansixiyay ee HUD. La tasho la taliye la aaminsan yahay, oo dhaqaale ahaan madax banaan ama qareen.
Miyaan u qalmaa daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Si buuxda ma u fahmaa sida daynsiga guryaha dadka waa wayn u shaqeeyo?
Sidee daynsiga guryaha dadka waa wayn uga duwanyahay daynsiga guriga caadiga ah?
Kumaa haysta gurigayga daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Dhab ahaan ma u baahanahay daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Maxaan qorshaynayaa in aan lacagta ku kharash gareeyo?
Ma sugi karaa inaan helo daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Ma awoodaa daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Ma awoodaa inaan bilaabo isticmaalka amaahda gurigayaga hadda?
Ma leeyahay ikhtiyaar ka qiima jaban?
Miyaan qorsheeyaa ku noolaanta gurigayga muddo dheer?
Ma haystaa dakhli ku filan si aan ku bixiyo kharashaadka kale ee la xidhiidha guriga, sida cashuuraha hantida, caymiska iyo dayactirka/dib u hagaajinta?
Hadda lacag ma ugu qaamaysanahay gurigayga, sida daynsiga guriga?
Maxaa ku dhacaya caawimada dowladda haddii aan helo daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Maxaa dhacaya ka dib markaan dhinto ama guuro? Miyay xaaskayga/laamanahayga ama dadka kale ee ku nool gurigu joogayaan?
Ma lahaan karaa dhul dhisan oo aan uga tago dhaxalkayga?
Sidee tani u saamayn lahayd dhaxalka aan uga tago carruurtayda?
Miyaan ku darsan karaa amaahda kale oo amaahda ah ka dib markaan shakhsi ahaan u saxeexo?
Su’aalahee ayaan waydiinaya KA DIB marka aan go’aansado inaan helo daynsiga guryaha dadka waa wayn laakiin KA HOR inta aanan bilaabin nidaamka?
Miyaan garanayaa dhammaan ikhtiyaarada aan haysto helitaanka daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Miyaan is barbardhigaa khidmadaha iyo kharashaadka amaahde ilaa amaahde kale?
Ma tirtiri karaa ama ma beddelaa ka dib saxeexida daynisga dadka waa wayn ee amaahdaha? ? (Sharciga Minnesota waxay bixisaa muddo todoba maalmood “ee go’aanka lagu gaadhayo in la iibsado iyo in kale” muddada taas oo aadka noqon karto aqbalaada ballanka amaahda qoran si loo sameeyo amaahda daynsiga dadka wayn ee dadka waa wayn. Sharciga federaalku waxa uu kuu oggolaaday inaad tirtirto amaahda daynsiga guryaha dadka waa wayn ee gudaha saddex maalmood oo ganacsi saxeexida warqadda xidhitaanka ee amaahda.)
Su’aalahee ayaan waydiin lahaa MUDDADA nidaamka daynsiga guryaha dadka waa wayn? Miyaan fahmay masuuliyadayda sidii amaahde?
Maxaa dhacaya haddii aanan buuxin masuuliyadahan?
Ma garanayaa oo ma fahmayaa wadarta kharashka iyo nidaamka dib u bixinta amaahda
Waa maxay kharashka la xidhiidha helida aynsiga guryaha dadka waa wayn, sida asalka iyo khidmadaha kale?
Kharashkee ayaa is biirsan doonaa wakhtigaa, sida dulsaarka?
Maxay noqon doontaa hadhaaga amaahdayda u dambaysa?
Waa maxay wadarta qadarka aan ka heli doono daynsigayaga guryaha dadka waa wayn?
Ma bixin karaa lacagta daynsiga guryaha dadka waa wa wayn ka hor inta aanay gaadhin wakhtiga?
Maxaan xusuustaa marka aan ka fekerayo wax ku saabsan daynsiga guryaha dadka waa wayn ?
Had iy jeer la tasho la taliyaha guriga madaxa banaan, maya qof uu mushahar siinayo amaahiyahaagu
Hubso la taliyahu inuu qarash gareeyo wakhti ku habboon oo uu kugu hubiyo inaad fahanto daynsiga guryaha dadka waa wayn iyo nidaamka.
Ka feejignaw marka aad xaadirayso siminaarada “waxbarashadda” ee ku saabsan daynsiga guryaha dadka waa wayn kuwaas oo uu ka faallo qaado amaahiyahu ama dilaalka kaas oo isku deyaya inuu alaabta iibiyo.
Haddii qofka iibiyaha ah uu kuu sheego in iibisiga alaab dheeraad ah ay lama huraan tahay, tani waa been Hoosta labbada sharciyada gobolka iyo federaalka, waa sharci darro amaahiyaha ama dilaalku inuu iibsado alaab dheeraad ah (sida lacagta go’an ee sanadkii la bixiyo, maalgelinta, caymiska nolosha ama caymiska daryeelka xiliga dheer) ee daynsiga guryaha dadka waa wayn.
Waa maxay calamada cas ee aan u baahana inaan raadiyo muddada nidaamka caymiska daynisga guri ee dadka waa wayn?
Waa maxay calamada cas ee aan u baahana inaan raadiyo muddada nidaamka caymiska daynisga guri ee dadka waa wayn? Calamada Cas
Had iyo jeer ka feejignow haddii amaahiyahu:
falo sida daynisga guryaha dadka waa wayn ay xalili doonaan dhibaatooyinkaaga
ay kugu cadaadiso si aad u qaadato amaah
kugu qalqaaliso adiga fikrado sida aad u kharash garayn lahayd lacagtaada
kugu cadaadiso inaad iibsato alaabta kale ee dhaqaale oo ay la socoto daynsiga guryaha ee dadka waa wayn
Kugu dedejiyaan nadaamka ka hor inta aanad la hadli karin dadka kale
Kugu cadaadiyaan inaad ka fogayso lamaanahaaga heshiiska amaada
kuu jiheeyaa adiga amaahda kharashka saraysa
Isticmaalaa farsamooyinka khiyaamada si uu kaaga iibiyo daynsiga guryaha dadka waa wayn
Ku tala bixiyaa in dowladdu si ahaan ay ugu taliso ama taageerto iibsiga daynsiga guryaha dadka waa wayn
Kuu sheega inaad iska dhegamariso talada la taliyaha amaahda daynsiga guri ee dadka waa wayn
Sheegashooyinka weligaa ma lumin doonto gurigaaga – tan lama huraan ahaan dhab maaha.
Calamada cas ee dheeraadka ah
Qof ayaa isku daya inuu wax kaa iibiyo )wax kasta laga bilaabo saqaf cusub oo fasaxa ah) oo waxa uu soo jeediyaa inaad ku bixiso daynisiga guri ee dadka waa wayn.
Haddii ay u eegtahay inaad helayso lacag bilaash ah, ma helaysid. La hadal qof kale inuu si wanaagsan u fahmo waxaad helayso iyo kharashuu noqon doono.
Heshiisku waxa uu u eegtahay dhab ah inuu run noqdo. Waxaa laga yaabaa inuu kaa maqanyahay macluumaad aad u muhiim ahi.
Shirkadu waxay ku soo dalacdaa khidmad si lo helo amaahde daynsiga guriyaha dadka waa wayn ah.
Xaqa in guriga la haysto intaad daynka bixinayso ee saaran gurigaa cinwaanka aanad fahmin.